ဟေ့၊အဲ! ကြိုးစားချင်ထွက်ကာတြန္းမှုတ်သွင်းဟီး။ ကောင်းပြီ၊ဘယ်လိုအကြောင်းတကြောင်းရဲ့အနည်းငယ်ပိုပြီးကြမ်းတမ်းသောအထက်နှင့်ပြည့်စုံ၏၊အပြည့်အဝလွလိုးည့္ခ? သံတူကတိအိပ်မက်ကိုတောင်းလျှင်အ၊သင်ဖြစ်သင့်! အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်မယ့်သူရဲကောင်း Cummy နှင့်ယခုအမျှဝေဖို့အဆင်သင့်နှင့်အတူတစ်ခုလုံးကိုလော။ ဒီဂိမ်းဟာပထမဦးဆုံးမျှော်မှန်းထားပြန်၏ဇူလိုင်လအတွက် ၂၀၁၅ အစဉ်အဆက်ကတည်းက၊ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပေါ်လတ်ဆတ်သောထေးခြင်းနှင့် beta ဗားရှင်းသေချာစေရန်ရနိုင်တဲ့ပြီးပြည့်စုံသော၊ဘီညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ။, ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကသင်သွားမယ့်အချစ်သူရဲကောင်း Cummy ကြီးကြောင်းၿပီသွားပေးတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ မှန်–သင်ဖို့ရှိသည်မည်မဟုတ်တစ်ပြားပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဒီ XXX။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲအသွားအခမဲ့နှင့်ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းအပန်ကာအခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်သန်အကြောင်းကျွန်ုပ်တို့လွှတ်ပေးသောသူတို့ထောက်ခံမှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကို microtransactions။ မစိုးရိမ်ပါနဲ့:သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဝယ်ယူရန်ဘာမှဂိမ်းခံစားဖို့ဒီမှာ–ဒါကြောင့်ကိုယ့်အနည်းငယ်ကက္သားအပိုဝတ်စုံနှင့်မွာက္သည္အပြောင်းအလဲငယ္ဆီအခွံမာကိုယ့်အကြောင်းနည်းနည်းပိုလွယ်။, ယခုထိုအခါ၊ရဲ့ပြောဆိုကြကုန်အံ့အကြောင်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းနှင့်အသင်သည်အဘယ်သို့ရှာတွေ့ဖို့မြျှောလအတွင်း။
အကြောင်းရင်းမှာရိုးရှင်းလှရှင်းပြဖို့:သင်အဆိသူဖြတ်ပြီးလာအချို့သောဘုန်းနှင့်ယခုသင်တာပေါ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းများအတွက်လက်ဆောင်အမြင့်-အသက်အရွယ်ကျောင်းသူတစ်ဦးချင်းစီဝေမျှအလားတူဝိသေသလက္ခဏာများ။ အဆိုပါ၏ရည်ရွယ်ချက်အညာစက်ရုံကိုကူညီသင်သည်သင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်စည်းကမ်းကိုယ်အဘို့ပြင်ပကမ္ဘာ။ ဒါဟာဆန့်ကျင်ဘက်ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်သင်အတွက်ကိုက်ရုံဒဏ်ငွေနှင့်အလုပ်အများဆုံးအချိန်မှာကျောင်း။ သဘာဝကျကျ၊ဒီအလိုးပုံစံဂိမ်းအများကြီးစာသင်ဖြတ်ပြီးလာလိမ့်မယ်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖစ္လာရှာဖွေနေအချို့သောကာမဂုဏ်အရေးယူ။, သံတူတစ်ခုခုဖြစ်စေခြင်းငှါအတွက်စိတ်ဝင်စား? ထိုအခါရကုန်အံ့အကြောင်းပြောနေအဘယ်အရာကိုသင်အောင်မြင်ရန်နိုင်အားကစားသူရဲကောင်း Cummy နှင့်မကြာမီလုံလောက်တဲ့၊သင်လိုပါလိမ့်မယ်အဆီသင့်ရဲ့အခွံမာသီးကျော်အားလုံးဒီၡမ်ား schoolgirls တဲ့သူများမှာကိုယ့်အဘို့အတောင်းသင့်ကြက်! အိုး၊နှင့်ပြင်ဆင်ထားဖြစ်ဖြတ်ပြီးလာရန်အနည်းငယ်ဇာတ်ကောင်ထက်လျော့နည်းများမှာ-သူတို့လိုချင်တဲ့အကြွက်တက်ခြင်း၏စတိုင်နှင့်အရေးအကြောင်းသင်ပေးလျော်၊တိုင်းတာတုံ့ပြန်မှုမှမိမိတို့ silliness။ အားလုံးပြီးနောက်၊သူတို့တွေဟာသူများဖြစ်ကြတက်အဆုံးသတ်သွားဘောလုံးနက်ရှိုင်းအတွက်မုန့်၏အဆိုပါကျောင်းရဲ့ sexiness၊မှန်သော? မှာအနည်းဆုံးအဲဒီလိုအတွေး။, သူတို့ကိုသတ်ကနေတဆင့်စုတ်အပူမွီ–လို့ပြော!
ဒီဂိမ်းဟာအဓိကအားဖြင့်ရှေ့သို့ရည်ရွယ်အကြော weebs နှင့်လိုးချစ်သူများဖို့ဆုံးဖြတ်၊ငါတို့သည်ခဲ့ဖို့ကောင်းတစ်စိတ်ကူးထားတာဒမ္နောက်သူရဲကောင်း Cummy ဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်ရှိသည်အရာတစ်ခုခုကဒီမှာလိုက်နာရန်နှင့်နားလည်။ ကျွန်တော်တို့လေးမြတ်တန်ဖိုးထားကြောင်းလူတိုင်းမဖြစ်စေခြင်းငှါကြောင့်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့မျှမျှတတစိတ်ချယုံကြည်င်။ ဝီ၊ဟီး Cummy ဖြစ်ယူဆကြောင်းတစ်ဂိမ်းမှတဆင့်တိုးတက်မှုနှေးကွေးနိုင်ရန်အတွက်အပြည့်အဝမယ့်ဘာကိုနားလည်သဘောပေါက်။, အဲဒါတွေအများကြီးများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအနှံ့ခေါင်းစဉ်အဖြစ်၊ဒါကြောင့်အဖြစ်ကောင်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖို့သေချာပါစေမယ့်စိတ်ပိုင်းပြင်ဆင်ထားသည်များသောအားဖြင့်ဖတ်မင်းအတွက်လိုင်းများ! အဖြစ်အမှုအရာအဆင္ေရပ်အတွက်ဗားရှင်း ၁။၁ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းရှိပါတယ်၊ကိုယ့်ကိုကျော် ၂၀၀၊၀၀၀ စကားလျှင်ဒိုင်နိုင်ဖော်ထုတ်ပြီးတဆင့်သွား–တော်တော်လေးမင်းအထင်၊လက်ျာ? ကျနော်တို့စိတ်ကူးစာရေးဆရာရဲ့အပေါ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြနှင့်ဤဂိမ်း၎င်းစကားအသုံးအနှစ်၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့စဉ်းစားအဆိုပါရလဒ်သည်အတော်လေးအထူးအမှန်ပင်။, သဘာဝကျကျ၊သင်ရှိသည်ဖို့ဂိမ်းထွက်ကြိုးစားကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အကြည့်ဖို့သွားလျှင်ခိုးယူဖို့သင်၏နှလုံး(သင့်ဘယ်လိုလဲ)၊ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားယုံကြည်သောကြံစည်မှု၊storylines နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးဖှေလုံးဝစိတ်ကူး။ ပဲပြင်ဆင်ဖို့သွားချွတ်ရိုက်နှက်လမ်းကြောင်းကိုအချိန်:အများကြီးရှိပါတယ်မစ်ရှင်အကြောင်းမဟုတ်အပေါ်အဓိကခြေရာခံချင်ပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားရန်ဖြည့်!
အထွေထွေအတွက်-ဂိမ်းကစားဂရပ်ဖစ်ကောင်းသောဖြစ်ကြောင်း၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ထင်တာကအဓိကအဖို့ပြုသောပျက် cocks ဒီကနေတဆင့်အနုပညာလက်ရာ။ ကျွန်မတို့ဟာအကောင်းဆုံးအသင်းပတ်လည်မြှုပ်နှံကိုမိမိတို့ဖန်တီးရန်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအနုပညာလက်လိမ့်မည်ကြောင်းစာသားအတိုင်းသင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်(နှင့်သင်၏ဝန်)။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုတည်ဆောက်အပေါ်အများကြီးအမြင်အာရုံဒြပ်စင်များ၊ငါတို့အဖို့သေချာအောင်သူတို့တွေအဆင်သင့်နှင့် raring သွားရန်။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ဟီး Cummy အတွက်အချုပ်အနေအထားများကိုကမ္ဘာနှင့်အတူအချို့သောအလိုးဂိမ္းအရေးယူသူတို့ရိုးရှင်းစွာဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့လိမျ့မညျ။, ဒါဟာတစ်ကြယ်ထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ကကျနော်တို့ရရှိပါသည်နှင့်ဟုတ်တယ်မင်းကိုမြင်ချင်ဒီလိုးကားအနုပညာလက်ရာများတင်ထားနှင့်ဒပ်နောက်ကျတာထက်။ ရှိပါတယ် ၃၅ ထူးခြားတဲ့ NPCs သင်အမှန်တကယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်အတူလိင်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့မူပိုင်ခွင့်၊လိင်ဖစ္ၿ၊အပေါင်း ၈၈ အနုပညာကဒ်မြင်ကွင်းနှင့်အတူမျိုးစုံရုပ်တုဆင်းတုႏွလွှတ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့သော့ဖွင့်အားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်အတွက်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအထိနူး'အကြောင်း'ခလုတ်ကိုသင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်သွားဖို့အပေါင်းတို့အားဖြင့် XXX မြင်ကွင်းများ:သင်ရှိသည်ဖို့သွားကြသည်အတိပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူသူတို့ကိုချစ်လျှင်သင်လိုးကား၊သေချာသည်!
ဒါဟာသဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးကြောင်းသင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဒီအကျိုးဆက်တွေ၊ဒီတော့သွားပြီးဘာမှလုပ်နေတယ်ရီစရာ၊သည်ကားသင်တို့သည်နောက်တဖန်သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးအချို့အစိတ်အပိုင်းဂိမ်းအတွက်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာတော်တော်လေးကိုယုံကြည်ကြောင်းချစ်ကြတာပေါ့အဘယျသို့သူရဲကောင်း Cummy အားလုံးလောက်သည်အအေး:ဒါဟာဖြစ်မသွားမယ့်တစ်ဦးအကြွင်းမဲ့ပေါက်ကွဲမှုများအတွက်သင်မှပြန်ကန်ဒီဂိမ်းအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုလိမ့်မည်အကြီးအကျယ်သြဇာလွှမ်းမိုးဘယ်သို့ဖြစ်ပျက်လာမယ့်။ ပတ်ပတ်လည်ရှိပါတယ် ၁၂ နောက်ဆုံးတွင်ထူးခြားသောနှင့်အတူအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားခြင်းများအပေါ်အသီးအသီး–ကျိန်းသေတန်ဖိုးရှိတဆင့်သွားနှင့်ရှာဖွေစူးစမ်းဘာတူညီသောရွေးချယ်မှုများဖြစ်ကြသည်။, နောက်ထပ်၊ဒီဂိမ်းကျော်ရှိပါတယ် ၈၀ အောင်မြင်ရန်အဘို့အဆင္ေသော့ဖွင့်၊အသီးအသီးနှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုး!
ဒါကြောင့်၊သင်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသင့်ရဲ့စွမ်းထက်တန်းကျောင်းအဖြစ်အပျက်? သင်ထားေသာအထူးအရည်အချင်းနှင့်မင်းများအားလုံးအနှံ့လာအမျိုးသမီး? ယခုထွက်ရှာတွေ့အားဖြင့်ကြိုးစားနေကျွန်ုပ်တို့၏၁၀၀%အခမဲ့လိင်ဂိမ်း!
© Copyright 2021 HeroCummy All Rights Reserved